Toamasina : karana iray indray nisy naka an-keriny | NewsMada
Fifanjevoana, fifanosehana tetsy Mahamasina: 16 namoy ny ainy, 80 mahery naratra ...juin 27, 2019
Andry Rajoelina au chevet des victimes: la bousculade fait 17 morts et plus de 80 blessés ...juin 27, 2019
Fifanjevoana, fifanosehana tetsy Mahamasina: 16 namoy ny ainy, 80 mahery naratra
Andry Rajoelina au chevet des victimes: la bousculade fait 17 morts et plus de 80 blessés
Nandriaka ny ra tetsy 67 ha: tovolahy nandeha moto, voatifitra antoandrobe
Promesse présidentielle: des nouveaux appareils pour les forces de l’ordre
Notes du match: décevante prestation de Faneva Ima
“Can 2019”: ady sahala tamin’i Ginea: mila mandresy an’i Burundi ny Barea
Loi sur le recouvrement des avoirs illicites: l’exécutif affiche sa détermination
Tratra nanao kolikoly: any am-ponja ny polisy iray sy resevera ary mpamily taxi-be
Election de proximité: le Kmf/Cnoe exige plus de crédibilité
Nisoloky ho mpivarotra merkiora: efa nahazo 250 tapitrisa Ar hanaovana sorona ilay ramatoa
Toamasina : karana iray indray nisy naka an-keriny
Par Taratra sur 09/06/2018
Nitrangana fakana an-keriny indray tany Toamasina, omaly hariva. Karana iray tompon’ny Business Center, antsoina hoe Nizar Pirbay, io nisy naka an-keriny io. Raha hamonjy fodiana io Karana io no nisy jiolahy naka an-keriny tany Salazamay, tsy lavitra ny sekoly Ste Thérèse. Voalaza fa zaodahin’ny depiote Irma io Karana io. Tsy mbola nisy vaovao momba ny tohin’ny fakana an-keriny ny halina.
Karana fanintelony, tao anatin’ny iray volana teo, ity nisy naka an-keriny ity. Ny roa teto Antananarivo, izay samy mbola tsy nisy hita, ary tsy nahazoam-baovao. Ny iray nisy naka an-keriny teny akaikin’ny Gamo Soavimbahoaka, ary ny faharoa vao ny alahady lasa teo, teny Andakana eny amin’ny fanaovana golf. Ny teo anivon’ny fianakaviana, manamby volabe ho an’izay manome vaovao. Ny mpitandro filaminana andaniny tsy manan-kolazaina fa mety tsy mahita rirany amin’ny fanadihadiana.
Ity trangana fakana an-keriny ity izay efa mampikaika ireo teratany karany mizaka ny zom-pirenena frantsay eto amintsika. Manao antso avo amin’ny fitondrana, saingy tsy misy vokany mihitsy hatramin’izao.
Sajo sy Yves S.
Rugby à 7 vehivavy – Aroi: firenena telo hiady ny lohany 27/06/2019
Kitra – «Can 2019»: tsy mahazo manao resy na sahala amin’i Borondi ny Barea 27/06/2019
Motostore: hisy ny “Tanamaniacs” 27/06/2019
Mahazoarivo: notsinjovina manokana ny zokiolona sy ny ankizy 27/06/2019
La politique en bref :